Masuuliyiin iyo Dadkii Banaanbaxa Dhigaayey Saakay oo la Xir xiray | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Masuuliyiin iyo Dadkii Banaanbaxa Dhigaayey Saakay oo la Xir xiray
Masuuliyiin iyo Dadkii Banaanbaxa Dhigaayey Saakay oo la Xir xiray
Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa saakay fashiliyay banaan bax ay soo abaabuleen mucaaradka dowlada federaalka Soomaaliya oo looga soo horjeeday mudo kororsi la sheegay in dowlada hada jirta ay damacsa tahay.
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in ciidamada booliiska ay xireen qaar kamid ah dadkii hor kacayay banaan baxa saakay ka dhacay fagaaraha daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho.
Dadka la xiray waxaa ku jira gudoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis Cusmaan Muxudiin Cariif oo kamid ahaa dadkii hor kacayay dadka banaan baxa dhigayay, waxaa sidoo kale booliiska xireen dad kale oo iyana hor boodayay banaan baxa.
Ciidamada booliiska ayaa rasaas culus u adeegsaday sidii loo kala eryi lahaa dadka isugu soo baxay in ay dhigaan banaan baxa looga soo horjeeday dowlada gaar ahaan qorshaha Madaxtooyada mudada ku kororsaneyso.
Waxii warar ah ee usoo kordha warkan kala soco Wararkayaga dambe insha Allah
Previous articleMaamul Goboleydyada Mataanaha ah oo ka Hor yimid ka qeyb Galka Shirka wada tashiga ah
Next articleDEG DEG; Xildhibaan ka Tirsan Hirshabeele oo la Afduubtay
Journalist Abdicasis Gurbiye, during his aggression during his 24 hours in...
What role does President Qoor Qoor play in the failure of...
Madaxweyne Farmaajo oo 27 Malyen kala baxay Bangiga Dhexe